Ciidanka Dowladda iyo AMISOM oo la wareegay degaan ay ka talinjireyn Al-shabaab | XORRIYA NEWS
Home Wararka Ciidanka Dowladda iyo AMISOM oo la wareegay degaan ay ka talinjireyn Al-shabaab
Ciidanka Dowladda iyo AMISOM oo la wareegay degaan ay ka talinjireyn Al-shabaab
Ciidanka Xoogga dalka iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ay howlgal qorsheysan ka sameeyeen deegaao duleedka ka ah Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Abaanduulaha dagaalka ayaa dheeay in howlgalka ay kula wareegeen Luuq Jeeloow uu ahaa mid qorsheysan.
Ciidamada dowlada iyo AMISOM ayaa howlgalka sigaar ah uga fuliyay deegaanka luuq jeeloow oo la sheegay in muddo badan ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-shabaab, hayeeshee ay la wareegeen Ciidanka dowladda.
Waxaa uu sheegay Abaanduulaha in howlgalka uu ahaa mid qorsheysan oo Ciidamada ay kula wareegeen luuq jeeloow oo muddo badan ay fariisimo ku lahaayeen Al-shabaab, isla markaana ay lacago ku qaadi jireen, waa sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale Abaanduulaha ayaa waxaa uu tilmaamay in howlgalka uu ka dhashay Khasaaro kala duwan oo uu sheegay inay gaarsiiyeen Al-shabaab, isla markaana ay Ciidamada soo furteen rag u xirnaa.
Ugu dambeyn Gen. Saalax Yacquub ayaa waxaa uu sheegay in howlgalka ay sii wadi doonaan ayna doonayaan inay gacanta ku dhigaan deegaano ka tirsan Gobolada Hiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ay ku sugan yihiin Al-shabaab